Lọ akwụkwọ agụmakwụkwọ - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Okpukpo oku na obi jụrụ nke ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ dị obosara ma dịgasị iche iche, na-achọ sistemụ a haziri nke ọma iji nye ebe mmụta na nchekwa dị mma. Airwoods ghọtara mkpa dị mgbagwoju anya nke ngalaba agụmakwụkwọ, wee nweta aha ọma maka ịhazi na ịwụnye usoro HVAC nke na-ezute ma gafere atụmanya ndị ahịa anyị.
HVAC chọrọ maka agụmakwụkwọ ụlọ ọrụ
N'ebe a na-akụzi ihe, nchịkwa ihu igwe nke ọma abụghị naanị ịnye ọnọdụ ikuku dị mma n'ofe ụlọ ọrụ, mana ijikwa njikwa ihu igwe gafee ọtụtụ oghere ma ndị pere mpe ma ndị nta, yana ịnabata ndị otu na-ezukọ n'oge dị iche iche n'ụbọchị. Maka arụmọrụ kachasị, nke a chọrọ netwọk dị mgbagwoju anya nke ngalaba nwere ike ijikwa onwe ha maka iji aka kachasị mma n'oge oge kachasị elu na oge kachasị elu. Na mgbakwunye, n'ihi na ime ụlọ juputara na ndị mmadụ nwere ike ịbụ ebe a na-azụ anụ maka nje na-efe efe, ọ dị mkpa maka sistemụ HVAC iji zute oke ikuku dị mma nke ikuku n'ime ụlọ site na njikọta nke ikuku na nzacha dị mma. N'ihi na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-arụ ọrụ na mmefu ego siri ike, ọ dịkwa oke mkpa maka ụlọ akwụkwọ ahụ inwe ike ịnye ezigbo mmụta gburugburu ebe ị na-ejikwa njikwa ego ike.
Halllọ Egwuregwu Ime ụlọ
Ime ụlọ klaasị
Lọ ọrụ ndị nkuzi
Na Airwoods, anyị ga - enyere gị aka mepụta gburugburu yana ikuku ikuku dị elu na ogo dị ala ịchọrọ maka ntụsara ahụ, ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ na-arụpụta maka ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi, na ndị ọrụ, ma ị na-arụ ọrụ ụlọ akwụkwọ K-12, mahadum, ma ọ bụ kọleji obodo.
Anyị maara maka ikike anyị nwere injinia ma wuo usoro HVAC omenala nke na-ezute ihe pụrụ iche chọrọ maka agụmakwụkwọ. Anyị na-eme nyocha zuru ezu nke akụrụngwa (ma ọ bụ ụlọ ndị emetụtara na kampos), na-echebara akụrụngwa, imewe, arụmọrụ na arụmọrụ nke usoro HVAC ugbu a. Anyị na-emezi usoro iji nye ọnọdụ kachasị mma n'ime oghere dị iche iche. Ndị ọkachamara anyị ga-eso gị rụọ ọrụ iji hụ na sistemu ikuku gị na-ezute ma ọ bụ karịa ụkpụrụ ogo ikuku. Anyị nwekwara ike ịwụnye sistemụ nlekota njikwa nke nwere ike ịhazi ọnọdụ okpomọkụ n'ọtụtụ oghere dị iche iche dị ka oge klaasị na nha, yabụ ị nwere ike belata ụgwọ ego site na naanị ikpo ọkụ na ime ụlọ dị jụụ ka a na-eji ha eme ihe. N'ikpeazụ, iji bulie mmepụta na ogologo ndụ nke usoro HVAC gị, Airwoods nwere ike ịnye usoro nlekọta na ndozi na-aga n'ihu nke dabara na mmefu ego gị.
Ma ị na-ewu ụlọ akwụkwọ ọhụụ site na ala, ma ọ bụ na ị na-anwa iweta ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ akụkọ ihe mere eme na koodu nke arụmọrụ ugbu a, Airwoods nwere akụrụngwa, teknụzụ na nka iji mepụta ma mejuputa ihe ngwọta HVAC nke ga-ezute ụlọ akwụkwọ gị chọrọ ọtụtụ afọ na-abịa.
Germany Elementary School HVAC Ngwọta
Mahadum Beijing Tsinghua
Zlọ akwụkwọ mba ofesi nke Suzhou Singapore
Mgbakwunye ụlọ akwụkwọ ọta akara nke mahadum Beijing
Onglọ Akwụkwọ Mongolia Hobby International